Emeputa ngwa ahịa na ngwa ahịa | N'oge
Nkwupụta mba ụwa bụ otu akụkụ kachasị mkpa nke azụmaahịa mba ụwa. Maka ọtụtụ n'ime ndị na-ere eBay / AliExpress / Shopiy iji buga ngwaahịa ha na mba ọ bụla. Nnukwu ọrụ ...
Nkwupụta mba ụwa bụ otu akụkụ kachasị mkpa nke azụmaahịa mba ụwa. Maka ọtụtụ n'ime ndị ahịa eBay / AliExpress / Shopiy na-ere ngwaahịa ha gaa mba ọ bụla. Nnukwu ọrụ dị iche iche nke Guangzhou Ontime na-atụ aro na-enye gị ọtụtụ nhọrọ dị iche iche maka mbufe nke ngwongwo ngwongwo gị. Na mgbakwunye na ibu ikuku na nke oke osimiri, emepụtara njem njem ngwa ngwa iji zaghachi atụmanya gị na mkpa gị ozugbo enwere ike. Ọrụ awara awara na-enye ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma na-aga n'etiti China na mba ahọpụtara. Onye ozi ahụ, nke a makwaara dị ka «nkwupute nnyefe awara awara», na-anọchi anya ọrụ «ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ» ebe ụlọ ọrụ na-ebuga ngwaahịa ga-ewepụ ngwongwo gị na adreesị nnabata ekwenye (na-abụkarị onye na-ebu gị ma ọ bụ onye nkwado gị na obodo gị) Mbupu gị na adreesị nnyefe (na ebe obibi gị ma ọ bụ adreesị onye ahịa dịka ọmụmaatụ).
Dị ka akụkụ nke nnyefe ndị a, ndị ọrụ na-ahụ maka usoro dị iche iche dị mkpa maka njem nke ngwongwo site na nke A ruo ebe B, ya bụ: mwepụ, mbufe / ibu, nnweta omenala na mmalite na njedebe ikpeazụ, ịkwụ ụgwọ ụgwọ na Ọrụ ndị ahịa kamakwa usoro nhazi niile chọrọ. N'ihi mmekọrịta siri ike na mmekọrịta anyị na ụlọ ọrụ nnyefe kachasị mkpa (DHL, FedEx, UPS na TNT),Guangzhou Ontime na-eme ka njem "ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ" dị ngwa ma nwee ntụkwasị obi n'etiti China na mba ahọpụtara. Mgbe ị na-ebugharị na oge GZ - ị na-ebu ndị ọkachamara na mbupu mba na ọrụ nnyefe ozi! Na ọtụtụ ọrụ ngwugwu na ọrụ ngwugwu anyị, yana mbupu na nsuso usoro iji kwado mkpa gị - mụta otu GZ Oge nwere ike isi wepụta!
1. E guzobere DHL na 1969, ugbu a DHL bụ ụlọ ọrụ na-eduzi ngwa ahịa ụwa. DHL bụ otu mba ofesi karịrị 380,000 ndị ọkachamara na-ebugharị ụgbọ mmiri, jikọrọ ọnụ site na oke agụụ maka ngwa ngwa. DHL na-arụ ọrụ na gburugburu ebe pụrụ iche. DHL bu ihe ohuru dika mbido, ya na ike nke otu ndi otu mba. DHL ga - enye ọrụ mbufe kachasị mma, ha nwekwara ikike ịchụpụ kọmpụta kachasị ike. Ọ ga-abụ nke kachasị ọsọ, na-efu naanị ụbọchị ọrụ 3 ~ 5.
2. FedEx / TNT FedEx Express kpuchitere adreesị US ọ bụla na ọrụ karịrị mba 220 na ókèala. Netwọk anyị zuru ụwa ọnụ na-enye mmetụta na-emetụta oge, ikuku na-egosipụta ọrụ site na ihe karịrị ọdụ ụgbọ elu 650 n'ụwa nile.
3. UPS Ndị ahịa mbụ. Ndị mmadụ Led. Innovation Akpali. Akụkọ banyere UPS, ụlọ ọrụ nnyefe ngwugwu kachasị ukwuu n'ụwa, malitere ihe karịrị otu narị afọ gara aga site na iji ego $ 100 iji bulie obere ọrụ ndị ozi. Otu anyị si ghọọ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke ijeri ijeri na-egosi akụkọ banyere njem oge a, azụmahịa mba ụwa, lọjistik na ọrụ ego. Taa, UPS bụ onye ahịa mbụ, ndị mmadụ duru, ihe ọhụụ mebere. Ihe karịrị ndị ọrụ 495,000 na-ejikọ ya karịa mba 220 na ókèala gafere okporo ụzọ, okporo ụzọ, ikuku, na oke osimiri. Echi, UPS ga-aga n'ihu na-eduzi ụlọ ọrụ ahụ ma jikọọ ụwa, na ntinye aka na ọrụ dị mma na nkwado gburugburu ebe obibi.
4. Aramex Aramex emewo ngwa ngwa ghọọ akara ụwa, amaara maka ọrụ ahaziri iche na ngwaahịa ndị ọhụụ. Edepụtara na Dubai Financial Market (DFM) ma dabere na UAE, Aramex dị na etiti dị n'etiti East na West, nke na-enye anyị ohere ịnye usoro nhazi nke ahaziri iche n'ebe ọ bụla n'ụwa ọfụma ma rute ọtụtụ azụmaahịa na ndị ahịa mpaghara na ụwa niile. Anyị na-agba mbọ na-eme ka ọrụ anyị gafee mpaghara ahụ ka anyị na-achụ ohere maka azụmaahịa na ahịa na-apụta na mba ọzọ. Approachzọ a bụ isi maka mmepe mmepe nke azụmaahịa anyị na ntinye aka iji kwado azụmahịa zuru ụwa ọnụ, ụwa na-agbanwe agbanwe.
5. Raara onwe ya nye akara. Karịsịa, anyị nyekwara ọnụahịa dị mma karịa nke ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ. Site na imekorita na Hongkong kwụsiri ike ikuku isi mmalite na ndị na-ebu ngwa ngwa ngwa ahịa ụwa na mba Europe na US, GZ Ontime Direct Line bụ ngwakọta na ọrụ nzipu ozi na ọnọdụ DDP (Kwupụta Ọrụ Akwụ ụgwọ). Anyị na-etinye ụgbọ elu site na Hongkong gaa n'ọnụ ụzọ ámá kwa ụbọchị ma jide otu ụbọchị nnabata omenala. Ọ bụ njikwa 100% zuru oke na ngwongwo ikuku na nnyefe kilomita ikpeazụ nke dị nke bụ azịza akụ na ụba yana nnyefe ọsọ ọsọ nke kachasị maka ngwugwu e-commerce mana ọ naghị ekpuchi ụwa niile. Nkwupụta ahụ ga - abụ naanị 5 ~ 7USD / KG. N'oge a, anyị nwere ọrụ a pụrụ iche maka Malaysia, USA, Europe. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, biko kpọtụrụ m, ka anyị wee nwee ike ịnye gị ọrụ kachasị mma maka gị.
Nke gara aga: Ezigbo aha njirimara maka ibugharị ngwa ngwa Shanghai USA UK Thailand DHL Ọnụ orzọ na-akwụ ọnụego ọnụ ala Site na ọnụ ahịa China Air Freight Cargo Shipping Agent na Europe
Osote: Ọnụahịa zuru ezu 2019 Express (DHL UPS FedEx TNT) Mbupu Si China na Israel